Gated kana Isina-Gated Zvemukati: Rini? Sei? Sei ... | Martech Zone
Muvhuro, June 26, 2017 Mike Tirene
Kusvitsa vateereri vako nekukonana nemaitiro avo edhijitari kuri kuita kuti zvisvike nyore kuburikidza nekushambadzira kwakanangwa uye midhiya. Kuisa mhando yako kumberi kwepfungwa dzemutengi wako, kuvabatsira kuti vazive nezvechako uye netarisiro yekuvapinza murwendo rwevatengi rwunozivikanwa zvakanyanya kuoma. Zvinotora zvemukati zvinowirirana nezvavanoda uye zvavanofarira, uye zvinopihwa kwavari panguva dzakaringana nguva yekufambisa iyo nzira.
Zvisinei, mubvunzo unoramba uchibvunzwa ndewekuti iwe unofanira "kuvanza" zvimwe zvemukati kubva kune vateereri vako?
Zvichienderana nezvinangwa zvebhizimusi rako, kuviga kana "kuvhara" zvimwe zvemukati zvako zvinogona kuita zvine mutsindo kuchizvarwa chinotungamira, kuunganidzwa kwedata, chikamu, kushambadzira kweemail, uye kugadzira chiratidzo chekukosha kana hutungamiriri hwekufunga nezvako zvemukati.
Nei Geti Ririmo?
Kubata zvemukati kunogona kuve yakakosha zano kana uchitsvaga kuvaka macampaign ekurera uye kuunganidza ruzivo nezve chako chinangwa vateereri. Dambudziko rinoitika kana uchikora zvakawandisa ndezvekuti iwe unosanganisa vateereri vanogona, kunyanya tsvaga vashandisi. Kana zvemukati zviripo pachena kune webhusaiti yako - asi yakavharwa - iro gedhi rinogona kudzivirira vateereri kuti vasariwane kana kuriona. Zano rekutora zvemukati zviri nyore kungo kurudzira vashandisi kuti vape ruzivo nezve ivo fomu yekugamuchira mubhadharo.
Ngozi ine gating zvemukati zvakareruka zvakafanana: kuvharira zvisirizvo zvemukati kunogona kudzora vateereri vako kubva pakuenderera mberi nekuita neyako brand.
Kuongorora Zvemukati zveGating / Kwete Gating?
Iyo nzira yekuongorora izvo zvemukati zvakanakira kugedhi uye kwete gedhi zvinogona kupatsanurwa muzvikamu zvitatu:
Rwendo rweVatengi Rwendo
Tsvaga Query Vhoriyamu
Hyper-Inotarisirwa, Yakanaka Zvemukati
Mibvunzo yeVatengi Rwendo Rwendo:
Ndechipi chikamu murwendo rwevatengi ivo varimo?
Ivo vari pamusoro-pe-iyo-fanera uye vari kungodzidza nezvekambani yako?
Ivo vanoziva yako mhando?
Gated zvemukati zvinonyanya kushanda zvakanyanya mukurera uye kuunganidza dhata kana mutengi ari pakati pechikamu chekutarisa uye chekutora nekuti ivo vanonyanya kuda kupa ruzivo rwavo kuti vagamuchire zvakakosha zvemukati. Nekugadzira iyo "velvet tambo mhedzisiro" yekusarudzika, mushandisi anogona kupa ruzivo rwakawanda rwe "premium" zvemukati, asi kana zvese zvirimo zvikaiswa mukova, zvinorasikirwa nemabatiro azvo.
Izvo zvakare zvakakosha kuti usarudze chaiwo kufunga uye kutora zvemukati zvekambani yako nekuti unogona kunanga vateereri vavo zvirinani uye chengeta vateereri vachiita.
Mibvunzo yeKutsvaga Query Vhoriyamu:
Ndeapi mazwi akakosha ekutsvaga anoshandiswa mune izvi zvirimo?
Vanhu vari kutsvaga mazwi aya here?
Tinoda here vanhu vanotsvaga aya mazwi kuti vawane zvemukati kana kwete?
Ndivo vateereri vekutsvaga vatinoshandisa?
Gated zvemukati zvikamu zvinotsvaga kubva pane zvakakosha zvemukati saka kana iwe usingatende kuti organic vateereri vanozowana kukosha mune zvako zvemukati, kuzvibvisa kubva mukutsvaga (kuitisa) kuchaita nyore kwazvo izvozvo. Dambudziko rakakura pakupindura iyi mibvunzo kuona kana iwe ucharasikirwa neakakosha organic yekutsvaga traffic nekukara zvemukati. Shandisa Zvishandiso zveGoogle Webmaster kuona kana vateereri vari kutsvaga yako mazwi akakosha mukati mezviri mukati yakakura zvakakwana. Kana avo vanotsvaga vari vako vavanoda vashandisi, funga kusiya izvo zvirimo zvisina kubvumidzwa
Pamusoro pezvo, nekumaka zvemukati uchipesana nedanho rayo murwendo rwevatengi, iwe unozvibvumira iwe kuvaka iyo yakasarudzika rwendo fanera. Semuenzaniso, kuziva (pamusoro-pe-iyo-fanera) zvemukati zvinogona kuve zvakajairika uye kutarisana neruzhinji zvichitenderera pasi izvo fanera mushandisi anoenda, zvakanyanya kukosha izvo zvirimo ndezvavo. Kungofanana nechinhu chero chipi zvacho chakakosha, vanhu vanoda "kupa / kubhadhara" icho.
Mibvunzo yeiyo Hyper-Inotarisirwa Zvemukati:
Izvi zvirimo zvakanangana zvakanyanya nechirongwa, maindasitiri, chigadzirwa, vateereri, nezvimwe?
Wruzhinji rwevanhu rungawana here izvi zvemukati kuva zvinokwezva kana zvakakosha?
Izvo zvemukati zvakanangana zvakakwana kana zvakare zvisina kujeka?
Pamusoro pekumaka zvemukati kune rwevatengi rwendo uye nekunzwisisa organic yekukosha kukosha kweako zvemukati, pane zvakare kutariswa kwedambudziko izvo zvako zvemukati zvinogadzirisa. Zvemukati zvakanangana neicho chinodikanwa chaicho chinodiwa, chishuwo, poindi yekurwadziwa, chikamu chekutsvaga, nezvimwe zvinonatsiridza mikana yevateereri kuburitsa ruzivo rwavo rwega. Ruzivo irworwo runogona kuzoshandiswa kupatsanura vashanyi vesaiti, munhu, uye kutaridzika zvakafanana profiles mumishandirapamwe yakakodzera yekuzoburitswa mune mamwe maratidziro ematanho mazhinji senge email, kushambadzira otomatiki / kutungamira kusimudzira, kana kugoverwa kwenzanga.
Pakupedzisira, kukweva vs. kusatutisa zvemukati kunogona kumisikidzwa nenzira yehunyanzvi faneli nzira. Kurudziro yakajairika ndeyekumaka zvirimo nenzira kwayo uye kugadzirisa izvo zvidimbu zvingakosheswa se "premium" kana kwete.
Panguva iyo vashandisi veadhijitari vanogara vachizadzwa nezvakakodzera kwazvo kwavari, zvakakosha kuti unzwisise maitiro ekuvarera kuburikidza nemusanganiswa wakasarudzika wezvinhu zvine gated uye zvisina kubatanidzwa. Kupindirana maitiro avo kwakakosha pakubata kwekutanga, asi zvirimo, panguva chaiyo, ye "mutengo" wakakodzera kumushandisi ndizvo zvichaita kuti vadzoke.
Tags: gutsikana rwendorwendo rwevatengimutengi rwendo rwendogated zvemukatigating zvemukatihyper-yakanangwayekutsvaga mubvunzo vhoriyamuzvakanangwa
Mike ndiye Senior Dhijitari Kushambadzira Strategist ye R2i. Anofarira zvisingaite nezve zvemukati; kuigadzira, kuitengesa, kuidya, kuiongorora uye nekuivandudza. Semunhu anotaurisa ane degree rekunyora, makore ekuva nekambani yekutora mifananidzo uye kupindwa muropa nedhijitari rekushambadzira nyika, ruzivo rwangu uye zvido zvinosangana zvakanaka senge mukuru wedhijitari wekushambadzira.